Mac တွင် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ ချိတ်နည်း ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Mac တွင် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ ချိတ်ဆက်နည်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအလုပ်များထဲမှတစ်ခုကိုသင့်အားမျှဝေလိုပါသည်။ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပါဝင်ပါ။. ဤကိစ္စတွင် ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ရရှိနိုင်သောကိရိယာများနှင့်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကို ဤသင်ခန်းစာတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည်။
ဒီတာဝန်ကို တော်တော်များများ သိပြီးသားဖြစ်နိုင်ပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေမှာ သေချာပေါက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သော ကိရိယာများ သို့မဟုတ် အက်ပ်လီကေးရှင်းများကို သိရန်ကောင်းပါသည်။ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပါဝင်ရန် macOS တွင် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ကိရိယာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ပုံများ။
1 Mac တွင် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ ချိတ်ဆက်နည်း
2 ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပါဝင်ရန် Pages ကိုသုံးပါ။
3 Pixelmator Pro၊ Photoshop နှင့် အလားတူအက်ပ်များသည်လည်း တရားဝင်သည်။
4 [ဘောနပ်စ်] iOS စက်များအတွက် Picsew အက်ပ်
4.1 Picsew ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲ။
အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင့်ကွန်ပြူတာတွင်ထည့်သွင်းထားပြီးသောကိရိယာများကိုသင်မသိပါက၎င်းသည်တကယ်ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်တစ်ခုလိုထင်နိုင်သည်။ Macs အားလုံးသည် Third-party အက်ပ်လီကေးရှင်းများမလိုအပ်ဘဲ ပုံနှစ်ပုံကူးထည့်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးထားသည်။
ရုပ်ပုံ သို့မဟုတ် ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံကို တည်းဖြတ်ရန် ကြိုးစားနေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အများစုကို သတိရမိသည့် ပထမဆုံးအရာမှာ Mac တွင် အကြိုကြည့်ရှုခြင်းတူးလ်ကို ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် ကံမကောင်းစွာဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို ချိတ်ဆက်ရန် ယန္တရားကို မပေးဆောင်ထားသောကြောင့် ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အနည်းငယ်ပို၍လည်းကောင်း၊ အခြားဇာတိ Apple အပလီကေးရှင်း၊ Pages သို့သွားပါ။. တော်တော်များများက အဲဒါကို အံ့သြနေကြမှာ သေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့က ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အက်ပ်လီကေးရှင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အလိုအပ်ဆုံးအရာမှာ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို ကူးထည့်ဖို့ အရိုးရှင်းဆုံး၊ အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပါဝင်ရန် Pages ကိုသုံးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အရာမှာ Pages အက်ပ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင် ၎င်းကို App Store မှ လုံးဝအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို execute ပြီးရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗလာစာရွက်အသစ်ကိုဖွင့်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့တွင်ဤပုံနှစ်ပုံနှင့်ပူးပေါင်းရန်ဖွင့်ထားသောလျှောက်လွှာကိုရပြီ၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop မှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများရှိသည့် ဖိုင်တွဲမှ အကွက်အလပ်သို့ ဆွဲယူပါ။. ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို အပလီကေးရှင်းအတွင်း၌ ထားရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုင်းတာမှုများကို ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းအတွက် တစ်ခုစီအပေါ် ညွှန်ပြချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်၊ တိုင်းတာမှုများကို ချိန်ညှိပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဒက်စ်တော့တွင် တွဲထားပြီးသော ပုံများ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ ဖိုင်ကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် အလိုရှိသော ဖိုဒါတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ ဤတာဝန်သည် Pages နှင့် အမှန်တကယ်ရိုးရှင်းသောကြောင့် ပထမဦးစွာ သင်တို့အားလုံးကို အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်စရာများစွာအတွက် Mac တွင် ဤအက်ပ်ကို အသုံးပြုပါ။
ဓာတ်ပုံတွေကို ချုပ်ဖို့ ဒီကိရိယာကို သုံးတယ်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းအဆင်ပြေပြီး သုံးရလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အကောင်းဆုံးကတော့ အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးဘဲ သင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ယုတ္တိနည်းအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူတစ်ဦးစီသည် မတူညီသော်လည်း စာမျက်နှာများနှင့်အတူ သင်သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သင်သိထားသင့်သည်။
Pixelmator Pro၊ Photoshop နှင့် အလားတူအက်ပ်များသည်လည်း တရားဝင်သည်။
ယုတ္တိနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပေါင်းခြင်းအတွက် ရွေးချယ်ခွင့်အတွက် ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းကို စျေးကွက်တွင် စတင်ရှာဖွေသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် များစွာပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ ဒါပဲလား။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဤဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးဆောင်သည့် အပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။.
Pixelmator Pro သည် လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက macOS ဂေဟစနစ် (iOS အတွက်လည်း) အသုံးပြုသူများကြားတွင် ပေါ်လာသည်။ စျေးနှုန်းသင့်တင့်စွာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ယုတ္တိနည်းအားဖြင့် ဤအပလီကေးရှင်းသည် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ၏ ပေါင်းစည်းမှုကို ပြုလုပ်ရန်သာမက အရည်အသွေး၊ တောက်ပမှု စသည်တို့ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်သူအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤသဘောအရ၊ Pixelmator Pro ကိုအသုံးပြုထားသောဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းသည်ဤအမျိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်အတွက်လျှောက်လွှာ Pixelmator Pro သည် အခမဲ့ အစမ်းသုံးရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးသည်။ အပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုသူများအတွက်။ သင်သည်ဤအပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ရန်လုံးဝအခမဲ့ကြိုးစားပါ။ သင့် website မှတိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် Mac အက်ပ်စတိုးကိုယ်တိုင်၊ Mac App Store မှ။
Pixelmator Pro ကို€ 39,99
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဓာတ်ပုံများချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် macOS Preview tool ကိုအသုံးပြုသူအချို့သည် လွန်ခဲ့သည့်အချိန်အနည်းငယ်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် လွယ်ကူသည်မဟုတ်သည့်အပြင် အဆင့်များစွာလိုအပ်ပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအပလီကေးရှင်းများဖြင့်၊ Pixelmator Pro၊ Photoshop နှင့် သို့မဟုတ် macOS စာမျက်နှာများကိုယ်တိုင်ပင်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ ဒီတာဝန်ကို အချိန်မီလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ထပ်တလဲလဲနည်းနဲ့ မဟုတ်ဘူး။
[ဘောနပ်စ်] iOS စက်များအတွက် Picsew အက်ပ်
ဤလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် iPhone အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက်၊ Picsew တွင်ရရှိနိုင်သော application များအားလုံးကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကို ငါသိတာကြာပြီ၊ အဲဒါက ငါ့ရဲ့ iPhone ဒါမှမဟုတ် iPad ကနေ တိုက်ရိုက်အများဆုံးသုံးတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည် Apple App Store တွင် ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် bug သို့မဟုတ် ပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်သော အက်ပ်အသစ်မဟုတ်ပါ။
ဤကိစ္စတွင်အတွက်လျှောက်လွှာ မကြာသေးမီက ၎င်းကို 3.8.1 တွင်ထားခဲ့ပြီး အပ်ဒိတ်တစ်ခုကို ရရှိခဲ့သည်။ သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက်။ ၎င်းသည် ယခင်ဗားရှင်းတွင် တွေ့ရှိရသည့် ပြဿနာအချို့နှင့် PDF သို့ တင်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အက်ပ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော မတိုင်မီ တစ်ပတ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် တိုက်ရိုက်တိုးတက်မှုများကို ပြုပြင်ပေးသည်။
Picsew ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲ။
ဤအပလီကေးရှင်းသည် ၎င်းတို့၏ iPhone တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည့် အသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးပြုရန် အမှန်တကယ် ရိုးရှင်းပါသည်။ တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြီးသည်နှင့်အသုံးပြုသူသည်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ Gallery မှ သင့်ပုံများထဲမှ တစ်ခုချင်းစီကို ရွေးချယ်ပါ။လုံးဝမပြည့်စုံသော အပလီကေးရှင်းဆက်တင်များမှ ၎င်းကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်လိုသော ဓာတ်ပုံများကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် အလျားလိုက် အောက်တွင် ပေါ်လာသည့် ရွေးစရာကို ပေးရုံသာဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုယ်တိုင်က ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ခဏအတွင်း ဓာတ်ပုံကို ဘေးချင်းကပ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့က ပြခန်းထဲမှာ သိမ်းတာ ဒါပဲ။ ဤအပလီကေးရှင်းသည် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ဆောင်စရာများကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အများအပြားအသုံးပြုနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ ဤအပလီကေးရှင်းသည် သံသယမရှိဘဲ ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac တွင် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ ချိတ်ဆက်နည်း
2nm Mac M4 ချစ်ပ်သည် 2022 ခုနှစ်၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် တစ်ယောက်တည်းလာမည်မဟုတ်ပါ။
LG သည် USB-C ပါရှိသော 4K OLED မော်နီတာအသစ်နှစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။